काठमाडौँ — मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ‍ओली डिस्चार्ज हुँदै छन् । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्‌गाका अनुसार प्रधानमन्‍त्री ओली शुक्रबार साँझ डिस्चार्ज हुन लागेका हुन् । फाइल फोटो ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँको पूर्ण स्वास्थ्यलाभपछि आज साँझ त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिने भएको छ’,कार्यकारी निर्देशक डा. खड्‌गाले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ओलीको २१ गते बुधबार दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । प्रत्यारोपणका लागि ओली १९ गते भर्ना भएका थिए । ओलीका मिर्गौलादाता समीक्षा संग्रौला बुधबार डिस्चार्ज भएकी थिइन् । काठमाडौँ — मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि त्रिवि…
सिड्नी — अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्री पिटर डट्टनलाई कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण भएको छ । डट्टनले एक विज्ञप्तिमार्फत आफूलाई कोभिड-१९ को संक्रमण भएको पुष्टि गरेका हुन् । क्विन्स्ल्यान्डको एक अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको स्थानीय सञ्‍चारमाध्यम एबीसीले जनाएको छ। अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्री पिटर डट्टन तस्बिर : रोयटर्स डट्टन गत मंगलबार सिड्नीमा आयोजना गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएर सोही दिन व्यावसायिक विमानबाट क्विन्स्ल्यान्ड फर्किएका थिए। आफूलाई सन्‍चो नभएपछि स्थानीय अस्पतालमा जचाँउन गएका उनलाई कोभिड-१९ को संक्रमणको पुष्टि भएको हो। उनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा क्विन्स्ल्यान्ड सरकारको नियमअनुसार भाइरसको संक्रमण भएपछि अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने भएकोले आफूले…
२६ मंसिर, काठमाडौं । तीन तहको सरकारको संवैधानिक अवधारणाले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनियो । कोही भन्छन् गाउँमा सिंहमात्र पुगे दरबारचाहिँ केन्द्रमै रह्यो । अनि कोही भन्छन्– गाउँमा ‘छोटे राजा’ जन्मिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका कामलाई लिएर बिभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला बुधवार काठमाडौं ‘गाउँका सिंह’ भेला भएर गर्जिए । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले त केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई संविधान मुनिका छोटे राजाको संज्ञा दिए । सबैतिरबाट स्थानीय सरकारमाथि प्रहार भइरहेका बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने संवैधानिक र कानुनी जटिलताको जाँतोमा पिसिएका छन् । संविधानविद डा.विपिन अधिकारीले पनि यसमा सहमत…
मंसिर २३,काठमाडौँ । फिनल्याण्डकी ३४ वर्षीया सान्ना मरिन विश्वकै कम उमेरकी प्रधानमन्त्री बन्ने भएकी छिन् । उनी देशको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । मरिनले यही हप्ता नै पदभार ग्रहण गर्ने बताइएको छ । मरिनको नेतृत्वमा बन्न लागेको गठबन्धन सरकारमा ५ दल सहभागी हुनेछन्, सबै दलको नेतृत्व महिलाहरुले गर्नेछन् । फिनल्याण्डका पूर्व प्रधानमन्त्री आन्ती रिन्नेले राजीनामा दिएपछि सना मरिनलाई प्रधानमन्त्री बन्न जोड दिइएको थियो । यसअघि उनी पहिवहन र सञ्चार मन्त्री पनि रहेकी थिइन् । ३४ वर्षीया मरिन विश्वकै युवा प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । उनले युक्रेनका प्रधानमन्त्री ओलेक्सी…